Fotoana mihitsy mantsy izao hitadiavana ny very! Satria voatery mitoka-monina, na amin’ny ampahany monja aza, ny firenena maro manerana an’izao tontolo izao, dia voatery tsy sazoka mifantoka amin’izay zava-misy ao aminy. Ho antsika eto Madagasikara dia tena fotoana indrindra izao hampiroboroboana ny zava-misy eto an-toerana. Isan’ny voakasik’izany voalohany ny sehatry ny fizahantany, vokatry ny fanakatonana ny seranam-piaramanidina amin’ny fifamezivezena iraisam-pirenena, nanomboka ny alakamisy alina teo. Efa nisy moa ny dinika nifanaovan’ny minisitry ny fitaterana, Joël Randriamandranto, sy ireo mpandraharaha misehatra ao anatin’ny fizahan-tany, ka nitsirian’ny hevitra hampiroboroboana ny fizahan-tany anatiny. Izany dia heverina fa hanentsina ny fatiatonka aterak’izao fikatonana tsy fidiny amin’ny avy any ivelany izao. Misy ihany koa ireo orinasa hafa mahay manararaotra tsara ny zava-misy ankehitriny, toy ny orinasa iray mpamokatra savony vita malagasy. Mihazakazaka amin’ny fanaovana dokam-barotra amin’ny voka-tsoan’ny fampiasana an’ireo vokatra vokariny izy. Sady afaka manampy ny Malagasy hisoroka ny aretina izany no fanararaotra (opportunité) entina mampiroborobo ny orinasa malagasy ihany koa. Tsikaritra, ankoatra izay, ny orinasa miompana amin’ny finday, izay miezaka ihany koa mandoka ny fikirakirana vola amin’ny alalan’ny finday, antoka tsy hifindran’ny aretina amin’ny alalan’ny vola. Manana safidy isika, na hanaiky ho resin’ny valanaretina, na hamadika izany ho fanoitra hampivoatra an’i Madagasikara, amin’ny alalan’ny zava-misy ao aminy sy ny fahaiza-manaony. Mamokatra “vita gasy”, manjifa ny “vita gasy”. Maninona tokoa moa isika no handany vola any amin` ny hafa kanefa afaka mamokatra kojakoja ilaina amin` ny andavanandro isika eto Madagasikara? Amin` izay, isika ihany dia afaka mampiodina ny indostria sy mampiroborobo ny toekarena.